Farrimo Aad U Diri Kartid Gacaliyahaaga Si Aad Ugu Muujisid Inaad Jeceshahay - Aayaha
Home»ARIMAHA BULSHADA»Farrimo Aad U Diri Kartid Gacaliyahaaga Si Aad Ugu Muujisid Inaad Jeceshahay
1. “Waad idhiiri galisay gacaliye/gacaliso .”
2. “Waanku faraxsanahay inaan nolosha kugu helay.”
3. “ Waan nasiib badnaa markaan ku helay.”
4. “ Waxaan rajeeyaa inaan hadda ku dhunkan karo ”
5. “ Haye, waanku jeclahay waa inaad ogaataa taas.”
6. “ Aad ayaad unasiib badanahay waxaa tahay saaxiibka iigu wanaagsan dunida.”
7. “Layaab ayaad leedahay, waa inaad ogaataa.”
8. “Waxaad iga dhigtay qof wanaagsan, waanku jeclahay.”
9. “Farxad Ayaan dareemayaa inaan nolosha adiga kugu heysto.”
10. “Saacadaha Ayaan xisaabinayaa illaa aankaa arko.”
11. “Inaan kula joogo waa waxa ugu wanaagsan.”
12. “Mar waliba waanku jeclaan doonaa.”
13. “Waxaa tahay qof naxariis badan, waanku faraxsanahay.”
14. “Had iyo jeer adiga Ayaan halkan kuu joogaa gacaliye.”
15. “Marka aan isla joogno, waxaan dareemaa wanaag, ila jog waligaa sidaa darteed had iyo jeer waxan dareemayaa ammaan.”